पर्वतका पाँच कविःएउटै मञ्चमा ! – ebaglung.com
पर्वतका पाँच कविःएउटै मञ्चमा !
२०७३ माघ ४, मंगलवार १५:००	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, विविध, साहित्य
माघेसंक्रान्तिलाई हाम्रो समाजमा विशेष दिनका रुपमा लिइन्छ । यस दिन खिचडी, तरुल सखरखण्ड–चाकु लगायतका विविध परिकार खाने गरिन्छ । यही दिनलाई भने पर्वत कुश्माका स्रष्टाहरुले फरक ढंगले सेलिब्रेसन गरे । पर्वतका पाँच कवि गणेशकुमार जिसी, ओमप्रसाद घायल, संगीतश्रोता, भरत विवश पौडेल र आरके अदीप्त गिरीलाई प्रगतिशिल लेखक संघ पर्वतले कविता बाचनाको लागि एउटै मञ्चमा उभ्याएको थियो ।
कुस्मा बजार, पर्वत
भ्रमण नेपाल युवा क्लब, छिस्तीको प्रथम बार्षिकोत्सव सुरु !